Duulli olola maqa gurraachessuu Aigaforum.com fi fakkaattotasaa uummata Oromoo hin jilbeeffachiisu !
N.B. Tigire biyya Jirtu TPLF fi Tigiren biya Ala Aigaforum Dulla isaan Oromoo irrati goodhan irrati OPDO ibsa base Oromoo hundi beekuu qaba, sababan isaa umani midhama jiru umata Oromooti yakka dalagama jiru walti beekisuu qabna, Adunyati ilee beeksisuu qabna. Mada FB Dr. Solomon Urgashe irra
Weebsaayitoonni/Marsariitonni tokko tokko tibba kana bulchinsa biyyoolessaa Mootummaa Naannoo Oromiyaarratti duula ololaa maqaa gurraachessuu bananii dubbisaa jirra. Namni /qaamni kamiiyyuu mootummaa deggarees ta’ee mormee/qeeqee yaadasaa barreessuu, ibsachuu mirga akka qabu ni amanna. Ta’us holola sobaatifi soba adii guyyaa halakan taasisuun qotiyyoon jabbii dhale jedhee namatti himu ammoo dhaga’uurra sobduun sobduu jechuun saaxila baasuun murteessaa ta’a.
Kanumarraa ka’uudhaan Weeb-saayitiin/ marsariin aigaforum.com jedhamurratti barreeffame tokkorratti yaada kennuu yaalla. Miidiyaalee fakkaattotasaa kanneen duula sobaa maqaa mootummaa naannoo Oromiyaa gurraachesurratti bobba’anis haaluma kanaan deebii argachaa deemu. Olaantummaan seeraas akka kabajamu cimsinee hojjenna. Eenyuummaasaaniifi kaayyoosaanii waliin ummataaf ifa gochaa deemna.
Har’aaf ka’umsi keenya holola sobaa weebsaayitiin aigaforum.com jedhamurratti barreeffama maqa gurraachessoo ummataafi mootummaa naannoo Oromiyaarratti bane maalummaafi kaayyoosaa kan duduubaa ummanni akka hubatee hiikoo dhuunfasaa itti kennu carraa kanaan ibsina.
Bu’uurri holola barreeffamichaa walitti bu’iinsa daangaa aanoolee naannoo Oromiyaafi naannoo Somaalee Itoophiyaa ilaalchisee badii kan uume mootummaa naannoo Oromiyaati maxxansuuf yaaleeti.
Barriiffamni kun haala baay’ee qaanessaafi soba adii ta’een humnoonni hidhannoo cimaa ta’e qaban Oromiyaarraa ka’anii hawaasa horsiisee bulaa nagaa ta’anirratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachaa jiru; Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota leenjifaman ‘Paramillitary’ ummata Sumaalerratti dulchiseera jedha. Dhugaan jiru garuu waan biraati. Mootummaan naannoo Oromiyaa human leenjifamaa, meshaa waraanaa hanaga funyaanitti hidhate tokkollee hin qabu. Nageenya naannoosaa kan ittiin eegu milishota ummata keessaa filataman ilmaan ummataati. DhDUO uumamasaatiin dhaabbata ummataati. Ummata keessaa waan dhalatee ummata keesatti guddateef ummata jaalata, ni kabajas.
Oromoo tokkichillee qe’eesaa keessatti, qabeenyasaarratti du’uu hinqabu jedhee ejjannoo qabu ummata biroofillee ejjannoo wal-fakkaataa qaba. Ummata Somaalees akkasumatti ilaala. Kanumarraa ka’ee rakkoo ykn dabaafi shira kan qabu ummataafi mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa osoo hin taane qaama fedhasaanii harka wayyaa jalaatiin guuttachuuf fedhaniiti jedhee ibsaa kan tureef. Mootummaafi ummanni naannoo Oromiyaa pirooppogaandaa/hololaa weepsaayitoota ilaalcha uummatummaa hinqabneen oofamuutiin kan diigamu miti. Qaamni kamiiyyuu akkuma hubatutti ummanni Oromoo Saboota sablammootaafi ummatoota Itoophiyaa waliin obbolummaa, jaalalaafi walkabajuudhaan jaarraa hedduuf icciitii waliin jiraachuusaa humni diigu hin jiraatu. Ummataafi ummata walitti buusuun kaayyoo dudduubasaa jiru galmaan gahachuuf yaaluun daldala bu’aa hin qabneedha.
Barreeffamichi eddoowwan jeequmsi itti uumame naannoo bulchiinsa mootummaa Somaalee keessatti argamus jedhee ibsa. Dubbichi eega akkas ta’ee Godina Harargee Bahaatti aanaaleen kanneen akka Qumbii, Cinaaksan, Miidhagaa Tolaa, Gursum, Mayyuu Mulluqeefi Baabbilee; Godina Harargee Lixaatti aanaan Gumbii Bordoddee, Godina Baaletti aanaalee Daawee Sarar, Sawweenaa, Madda Walaabuufi Raayyituu, Godina Gujiitti aanaleen Gumii Eldalloofi Liiban, Godina Booranaatti aanaan Mooyaalee Bulchiinsa mootummaa Somaalee Itoophiyaa keessatti argamu jechuudhaa? Nama Ajaa’ibsiisa! Haala kanaan kan deemnu taanaan, mombaasaafi Zaanzibaar qaama bulchiinsa Itoophiyaati jechuudhakaa!
Carraa kanaan walitti bu’iinsi kun eenyuun akka uumame, eenyu eenyurratti miidhaa geessisaa akka jiru, jeequmsicha kana duuba harki eenyuu akka jiru, maaliif akka barbaachisee qaamni kamuu dhimmicha karaa haqaafi daandii ofiitiin qoratee dhugaa jiru akka hubatu gaafanna.
Barreeffamichi ofumasaatiin kan walitti bu’uufi walfaallessu fakkaata. Karaa tokkoon humnoonni hidhatan hawaasa nagaa horsiisee bulaa naannoo Somaleerratti miidhaa geechisan jedha. Karaa birootiin ammoo walitti bu’iinsi kun kan uumamme mootummaan Naannoo Oromiyaa Rifireendamii bara 1997 raawwatame waan kabajuu dhiiseef jedha. Barreeffamichi ka’umsa walitti bu’iinsa kana yoo teechisu, bara 1997 Gandoolee 420 irratti Rifireendamiin taasifamee, kanneen keessaa Gandoolee 80 naannoo Somaalee jalatti buluuf murteessuussaanii ibsee gandoolee 80 kanneen mootummaan naannoo Oromiyaa hin kennu jedhee waan dideef jedha.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa gandoolee mootummaa Naannoo Somaalee of harkaa qabu tokkollee kan hin jirree ta’uusaa hubatamuu qaba. Osuma jiraateeyyuu karaa qaroomina qabuufi nagaa ta’een rakkoo jiru hiikama malee haala lubbuu namaa galaafatuufi qabeenya mancasisuun hin ta’u amantaa jedhu qabna. Haala kanaan rakkoo uumame hiikuun osoo danda’amuu aanaalee godinaalee Oromiyaa 5 jalatti argama 16 of jala galchuuf humnoota ijaaramaniifi hidhannoo baraneetiin lammiilee ajjeesuun, qabeenyasaa saamuun, humnaan gaaffii daangaa hiikuuf yaaluun faallaa heera mootummaa keenyaati.
Mootummaan naannoo Oromiyaa heddummina sirna federaalawaa biyya kanatiif utubaa akka ta’e hubata. Kanarraa ka’uun lammiilee biyya kanaa jidduutti obbolummaan, walkabajuufi waliin jiraachuun waliin guddachuun akka milkaa’u aarsaa bakka hin buune kanfalaa tureera, ammas kanuma raawwachaa jiraacuunsaa beekamuu qaba.
Kana waan ta’eef aigaforum.com ta’ee fakkaattonnisaa ololli gaggeessan fudhatama kan qabu miti. Inumaayyuu eenyummaafi maalummaasaanii akka beekan gochuurra hin darbu. Barreeffama kanarraa akkuma hubatamutti, Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa ergamtoota ABOfi miseensota kaabinee naannchaa ammoo dhiphummaafi gahumsa dhabuutiin farrajeera. Farrajuu qofa miti; yaada furmaataatis kaa’uuf yaaleera. Miseensota Caffee qulqulleessuun akka irra iraatu, hoggantoota naannichaa ammoo irra debidhaan qulqulleessuun dhaabuu barbaachisa jedheera.
Akka beeknutti Caffeen mootummaa Naanoo Oromiyaa ibsama birmadummaa aangoo ummata naannichaati. Bakka bu’oota ummata naannichaati.
Caffichi miidhama ummata bakka bu’eef irratti mari’atee kallattii furmaataa kaa’uun dirqamasaati. Hojiisaa kana fuula durattis cimsee kan itti fufuudha. Caffichi hojiisaafi dirqama ummanni irraa barbaadu raawwachuun ergamaa ABO ykn qaama biroo taasisuun farrajuun qaamni kun mootummaa naannoo Oromiyaafi ummata naannichaatiif tuffii qabu kan agarsiisuudha. Gama birootiinis maddi aangoon kaabinee mootummaa ummata naannichaa malee qaama biroo miti. Mirgaafi dantaa ummata Oromootiif qabsaa’uun, kanaafis wareegama gaafatu kanfaluun kan qaama biraa osoo hintaane kan lammii keenyaati. Nageenya, misoomafi guddina ummata Oromootiif kan dhiphatuufi hojjetu, qaama rakkoo ummatarraan gahaa jiru saaxiluun dhiphoota ykn qaama birootiin farrajuun fudhatama hin qabu. Kana gochuufis dandeettiis hamilees hin qabu! Dandeettiifi gahumsa kaabinee naannoo keenyaas kan madaaluufi eddo isa gitutti ramadee kan hojjisiisu ummata naannichaa malee kan qaamni biroo akka ofii barbaadeetti modeelafi Saayizii barbaadeen hodheefii itti kaa’u miti. Hawwuun ni danda’ama; hawwiin hawwuurra darbee dhugaa ta’uuf garuu hin danda’u! yoo jiraates sun darbeera!
Kanaafuu duulli olola weebsaayitii aigaforum.com ta’ee fakkaattonnisaa ummataaafi
Mootummaa Naannoo Oromiyaa hin jilbiiffachiisu!